Ahoana ny fomba hikarohana sarimihetsika nefa tsy fantatrao ny anarany | Omeo fialamboly aho
Misy olana izay sendra ny mpilalao sarimihetsika tsara indrindra aza matetika amin'ny fiainana ... Tsy fahatsiarovana ny lohatenin'ny sarimihetsika manokana hijerena na hanomezana torohevitra! Tsy afaka amintsika ny mahatadidy ny anaran'ny sarimihetsika rehetra hitantsika. Ny vaovao tsara dia izany Ny teknolojia dia afaka manampy amin'ny famelomana ny fitadidiantsika ary tadiavo ilay sary mihetsika izay mahaliana anay fatratra satria ny fanalahidin'ny fikarohana ihany no ilainay. Ity lahatsoratra ity dia manondro ny Toro-lalana XNUMX-dingana hikarohana sarimihetsika nefa tsy fantatra ny anarany.
Alao an-tsaina izany toe-javatra izany: avy miasa ianao ary ny zavatra tadiavinao dia ny miala sasatra eo alohan'ny fahitalavitra ary mijery sarimihetsika. Mikaroka ao amin'ny Netflix ianao ary anisan'ireo safidy asehony fa tsy hahita zavatra tianao ianao ... Avy hatrany dia tadidinao ilay sarimihetsika tianao rehefa hitanao tany amin'ny sinema ary tavela tao aminao ny faniriana hahita azy io indray. Ny mpilalao fototra no mpilalao tianao indrindra ary nampihomehy azy mafy ianao. Izy io dia maneho ny safidy tonga lafatra, ianao irery no miatrika ny olana: inona ny anaran'ilay sarimihetsika?
Aza manahy! ireo karazana toe-javatra ireo dia manana vahaolana tsotra sy haingana. Mila kely fotsiny ny fitadidianao ary manana Internet.
Ireto toro lalana ireto dia misy ireto manaraka ireto:
Angony araka izay azo atao ny fampahalalana
Zahao ao amin'ny motera fikarohana Google
Mampiasà loharanom-baovao miavaka
Eto ambany aho dia milazalaza amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny tsirairay amin'izy ireo:
1 STEP 1: Angony araka izay azo atao ny fampahalalana
2 STEP 2: jereo ao amin'ny motera fikarohana Google
3 STEP 3: Mampiasà loharanom-baovao miavaka
STEP 1: Angony araka izay azo atao ny fampahalalana
Io fandalinana kely io no fototra ary noho izany dia mila ny fanohanan'ny fitadidianao ianao hahitana ny tanjona, ampiasao ireto ohatra manaraka ireto:
Iza na iza no kintana amin'ilay tetika
Amin'ny tanàna aiza no misy ny sarimihetsika
Sehatra iray tadidinao manokana (Robot Dinosaurs -Giantika manafika ny tanànan'ny Hong Kong. Mpivady mitaingina fiara no mihazakazaka olona iray eny an-dalana sns)
Ny taona tombanana hitanao ilay sarimihetsika
Ireo olona niaraka taminao tamin'ny fotoana nahitanao azy ireo satria izy ireo dia loharanom-pahalalana mivantana izay indraindray afaka mamonjy fotoana sy ezaka amin'ny fikarohana
Karazan-tsarimihetsika: horohoro, tantaram-pitiavana, fisalasalana
Firenena niavian'ny sarimihetsika
Andian-teny manokana amin'ny fifampiresahana sasany ao amin'ny sarimihetsika
Zavatra miavaka eo amin'ny sehatra (famantaranandro, diamondra, kiraro, karazana fitafiana sns.)
Andramo manangona angona betsaka araka izay azo atao mba hanana fampahalalana manokana izay ho tena ilaina amin'ny dingana manaraka.
STEP 2: jereo ao amin'ny motera fikarohana Google
Azo atao izany fanontaniana tsotra ao amin'ny motera fikarohana hahitana ny lohateny amin'ilay sarimihetsika endri-javatra tadiavinay. Tsotra be izany, mila miorina amin'ny dingana 1 sy ny ohatra aseho eto ambany fotsiny isika.
Iza no anaran'ny sarimihetsika izay i Bruce Willis no mpitsabo ny zazalahy mahita matoatoa? (Fahatsapana fahenina)
Amin'ny sarimihetsika iza no misy mpivady mifanoroka am-pierena mandritra ny tafio-drivotra? (Diarin'i Noa)
Iza no anaran'ny sarimihetsika izay ampangaina ho mpanao famonoana olona ny namany? (Fototra voajanahary)
Lohateny amin'ny sarimihetsika malaza an'i Audrey Hepburn
Anaran'ny sarimihetsika Espaniola izay itondran'ny lehilahy iray ny zanany any am-pianarana ary hitany fa misy baomba ny fiarany (The Unknown)
Inona ny sary mihetsika tena mahery fo indrindra indrindra tato ho ato?
Anaran'ilay sarimihetsika nolalaovan'i Penelope Cruz sy mpilalao sarimihetsika iray hafa izay nandehanany nanao vakansy tany Barcelona ary raiki-pitia tamin'io lehilahy io ihany (Vicky Christina Barcelona)
Amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mety hifarana eto ny fikarohana ny sarimihetsika. Google dia tena fanampiana be tokoa ary manana ny baiko fikarohana ilaina mba hahitana ny fanazavana azo ampiasaina rehetra.
STEP 3: Mampiasà loharanom-baovao miavaka
Raha tonga eto ianao dia midika fa tena sarimihetsika manokana ilay horonan-tsary tadiavinao. Na izany aza, misy fitaovana an-tserasera izay hanampy anao hahita ny sarimihetsika ilainao. Faripariko eto ambany ireo loharanom-baovao ilaina indrindra izay be mpampiasa indrindra:
Inona ny sarimihetsika? Izy io dia motera fikarohana novolavolaina tany Failandy izay ny tanjony dia ny hanampy ny mpampiasa hitady sarimihetsika amin'ny alàlan'ny teny lakile izay tafiditra ao amin'ny motera fikarohana ankapobeny. Ireo teny ireo dia mila soratana amin'ny teny anglisy ary milazalaza ny ampahany amin'ilay tetika. Ny fampahalalana amin'ny antsipiriany dia hanamora ny fikarohana. Iray amin'ireo motera fikarohana mahomby indrindra izy io satria natao nieritreritra ny handinika ireo filaharan'ny horonantsary. Ny mpamorona ny sehatra dia Valossa ary mikendry ny hametraka ny tranokala ho "motera fikarohana voalohany miorina amin'ny tantaran'ny famaritana". Ny iray amin'ireo toetra mampiavaka azy dia ny fananana mpamantatra baikon'ny feo mitovy amin'ilay ampiasaina amin'ny Shazam sy Siri. Manana sarimihetsika maherin'ny 45 ao amin'ny portfolio-ny ny tranonkala.
Filmaffinity. Izy io dia pejy noforonin'ny mpitsikera Pablo Kurt Verdú any Espana. Izy io dia miasa ho toy ny tambajotra sosialy ahafahan'ny mpampiasa manao tolo-kevitra amin'ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny famoronana lisitra. Izy io dia misy tahiry lehibe misy rakitra ho an'ny sarimihetsika tsirairay izay misy sinopsis, ary koa ny fampahalalana momba ny talen'ny, daty famoahana, tranofiara, karazana, statistika, naoty, sns. Ny fitaovana lehibe indrindra omeny dia ny fahafahana miresaka amin'ny olon-kafa ary mahazo ny hevitr'izy ireo.
IMDB (Database momba ny sarimihetsika amin'ny Internet). Izy io dia iray amin'ireo loharanom-baovao fanta-daza indrindra amin'ny sehatra iraisam-pirenena, noforonina tamin'ny taona 1990. Ahitana tranofiara, ary koa ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny sarimihetsika misy endri-javatra. Na dia tsy manome fikarohana antsipirihany ho safidy aza izany dia afaka miankina amin'ny fikarohana sarimihetsika ataon'ny mpilalao ianao ary azo antoka fa hahazo fanampiana ianao.
Lahatsary sy bilaogy momba ny sarimihetsika. Loharanom-baovao marobe izy ireo satria misy olona marobe mandray anjara amin'ny forum ary mampitombo ny fahafaha-manao noho ny fisokafan'izy ireo misolo tena azy ireo. Ireto misy loharanom-baovao vitsivitsy manaraka ireto: Cinemania, The Lost Hours, Total Film, Blog de Cine ary Torrentfreak.
Amin'ny ankapobeny, ny fikarohana dia tokony ho haingana, na izany aza zava-dehibe ny mahatadidy antsipiriany bebe kokoa momba ny sarimihetsika tianao hampihena ny fotoana fikarohana. Manoro hevitra anao aho mba handrayo fanamarihana mba hahafahanao manadino mora foana ny olana rehefa manadino ny lohatenin'ny sarimihetsika ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » Cine » Ahoana ny fomba hikarohana sarimihetsika nefa tsy fantatra ny anarany
Andian-tsarimihetsika fahitalavitra tsara indrindra amin'ny taona 2018